About Us - Ningbo Leway Manufacturing Ltd.
Hlambi Door Ihenjisi
Sibamkela ngokufudumeleyo ukuba kutyelela inkampani yethu! Siyathemba ukuba ukuseka intsebenziswano olusenyongweni nawe ukuba iinzuzo efanayo!
Ningbo Leway iye ifakwe Equipments eliphezulu kwimveliso, kuquka lathes oluzenzekelayo ngaphezu kwama-50, oomatshini inaliti zeplastiki kunye nentsimbi oomatshini die-eyahlulayo. Abaliqela oomatshini ibandla esizilawulayo esizivala kuphuhliswa kunye noomatshini nokupakishwa. amandla emveliso zenyanga ukufikelela ukuya iiseti million 1.
Ningbo Leway Manufacturing Ltd kumenzi professional onceda ekuveliseni hlambi iindawo emnyango kuquka izileyi ucango ishawa, nezibambo, iihenjisi kunye nezinye ucango kunye window zekhompyutha.
Sibonelela inkonzo OEM, ODM, R yethu & iqela D eneemfuno ezizodwa ngokusebenzisa Cad, UG, PRO / E ukuphuhlisa ukuyila imveliso ezintsha, sidla basebenzisane abathengi ukuxhaphaza kunye noyilo iimveliso ezintsha ngaphezu kwe-100 ngonyaka ngamnye.
Home iPhone kuhlala amet, consectetuer Tracking Tracker, hijjaz sed
na umenzi professional taht onceda ekuveliseni hlambi iindawo emnyango kuquka ishawa izileyi emnyango, izibambo, iihenjisi kunye nezinye ucango kunye window zekhompyutha. Le ise Ningbo komzi, Zhejiang kwiphondo, kweekhilomitha ezingama-20 ukusuka Ningbo port kunye drive iiyure ezi-2 ukusuka Shanghai moya. Le nkampani kuthatha indawo ye 10,000 ezikwere zeemitha, ekubeni abasebenzi abangaphezu kwe-100 abanezakhono oqolileyo, kwaye engaphezu kwe-15 iminyaka yamava ekuveliseni iindawo emnyango kwiishawara.
Le nkampani usoloko ibambelela umgaqo wolawulo: umgangatho umphefumlo wenkampani. Thina Axhotyiswe wabaqeshwa abaphetheyo kunye novavanyo efanelekileyo, baxhotyiswa izixhobo eziziso lokulinganisa, izixhobo uvavanyo. inkqubo ukuhlolwa okungqongqo kuqinisekisa umgangatho mveliso omkhulu stickily ahlole lonke izinto engenayo kwiimveliso aphumayo. Kulo ilebhu, singenza iintlobo ezininzi ezahlukeneyo mvavanyo, ezifana uvavanyo ubomi inkonzo, iimpawu mechanical uvavanyo, uvavanyo lwefuthe ezinqamlezayo, uvavanyo umthwalo kunye novavanyo zokutshiza ngetyuwa. Ngokulawula umgangatho olungqongqo yonke inkqubo yokuvelisa, umgangatho yethu imveliso wamvusa ukuya kwinqanaba entsha kwaye uqinisekiswe CE, TUV, wabona kushishino ngokubanzi.
Le nkampani iye amandla amatsha strong kuyilo imveliso kunye nophuhliso. Sibonelela inkonzo OEM, ODM, R yethu & iqela D eneemfuno ezizodwa ngokusebenzisa Cad, UG, PRO / E ukuphuhlisa ukuyila imveliso ezintsha, sidla basebenzisane abathengi ukuxhaphaza kunye noyilo iimveliso ezintsha ngaphezu kwe-100 ngonyaka ngamnye.
Custom Zinc Alloy Products, Shower Door roller, Door Hinge, Sliding Door roller, Commercial Glass Door ephatha ngayo, Shower Door Handle,